Ny votoatiny azo atonta printy Nohavaozina taminy 2013/02/23 Takela isoratana ny soso-kevitrao
Ny tetikady manerantany amin'ny Semalt , Natalia Khachaturyan, dia mampitandrina fa ny fanavotana ny votoaty mba hampitombo ny habetsaky ny pejy ao anaty tranonkala dia mety hanimba haingana ny fanentanana an-tserasera. Ao amin'ny SEO, ny famokarana ireo mpampiasa anao amin'ny votoatin-tserasera sy vaovao dia tetikady maharitra izay afaka mahazo ny tranokalanao tena izy. Na dia izany aza, raha mipetraka amin'ny teknolojia mainty SEO ianao dia mety hahatonga anao ho tena olana amin'ny Google.
Antsoina hoe duplication ny votoatiny, ny fanontana votoaty dia iray amin'ireo teknikan'ny hatsikana mainty SEO izay ampiasain'ny webmasters amin'ny ankapobeny ho laharam-pahamehana ho an'ny teny fanalahidiny miovaova. Ny sasany amin'ireo webmasters dia niasa tamin'ny fiheverana fa mitombo ny pejin-tranonkala mankany amin'ny tranonkala iray manampy amin'ny fampitomboana ny fifandraisana amin'ny mpampiasa sy ny fampivoarana ny fahitana ny orinasa - raum mieten wetzikon. Na izany aza, ity hevi-diso ity dia noporofoin'ireo manam-pahaizana SEO fa ny famoahana ny votoatin'ny duplication amin'ny tranonkala iray dia mitarika ho amin'ny fanatsarana avo lenta.
Fampahalalana mahasoa momba ny votoaty voasintona
Ny fampiroboroboana ny fifandraisan'ireo mpampiasa anao sy ny famelezana ny tsenam-barotrao amin'ny fotoana tena misy dia tena manan-danja indrindra amin'ny resaka Internet sy Internet marketing. Ny fandefasana interactif, original, ary ny votoaty vaovao ao amin'ny tranokalanao dia manampy ny hisintona ny fijerinao ireo mpitsidika. Na dia izany aza, nisy mpitsidika vitsivitsy nizotra ny lalam-pifamoivoizana tamin'ny alàlan'ny fanatsarana ny vohikalany ho an'ny votoaty noraiketina ho an'ny teny fanodinana azy ireo mba hanamarihana izany.
Ny votoaty nofonosina dia voamarika fa fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona nataon'ireo webmasters mba hampiroborobo ny fandraisan'anjaran'ny mpampiasa ary hahazoana ny fifamoivoizana marina. Ireo strategies napetrak'ireo mpanentana ara-barotra, ireo mpandraharaha an-tserasera, ary ireo webmasters hatraiza amin'ny algorithm dia mitantara bebe kokoa momba azy ireo..Mendrika izany ny fahazoana fotoana ampy ahafahana mamorona votoaty interactive ary manome fampahalalana mahasoa ho an'ireo mpitsidika mety aminao. Ampahafantaro ny mpampiasa anao mba hamerenana bebe kokoa ny votoatin'ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny fampidinana ny votoatiny.
Ireo rafitra finday dia manavao tsy tapaka ny algorithm ampiasainy mba hahitana ny votoaty duplicated sy hikapoka. Ireto misy ohatra vitsivitsy amin'ny fingadahin-tsakafo ho endriky ny mainty hoditra SEO:
Ny famoahana sy famoahana votoaty
Ny famoahana sy fanaovana kopia votoaty avy amin'ny tranonkala hafa nefa tsy mampiditra fampahalalana mahasoa amin'ny fitaovana dia endrika endrika mainty SEO izay mety hanimba ny fanentanana an-tserasera. Mba hisorohana ny fanasitranana, dia jereo ny fampidirana fanazavana sarobidy sy fifanakalozan-kevitra amin'ny votoatinao mba hanampiana ireo mpampiasa anao.
Fampiasana teknika maoderina
Amin'ny fampiasana teknika maodely hanova ny lahatsoratra efa misy amin'ny solon-kevitr'ireo synonymes fotsiny dia teknika mainty SEO. Raha tokony hanolo lahatsoratra lahatsoratra miaraka amin'ny synonyms mba hamoronana lahatsoratra an-jatony na an'arivony, dia makà fotoana hamokarana votoaty vaovao ary hanatsara ny fomba fijerinao ny orinasa.
Ny fampidirana votoaty toy ny lahatsary virjiny
Raha nampiditra tranonkala avy amin'ny tranokala hafa ianao raha tsy nampidirinao ny endriky ny endriky ny endriky ny endriny, dia diniho ny fanitsiana ny paikadinao mba hisorohana ny fandrindrana sy lisitra anaty lisitra amin'ny algorithm
Mampiseho ny sakafo avy amin'ny tranokala hafa
Ny tranonkala E-varotra izay mamerina sy mamoaka ny fikarakarana any amin'ny toerana hafa ary tsy mametraka afa-po tsy manan-tsahala amin'ny tanjona tokana ahazoana tombontsoa avy amin'ny mpisera dia mety hiatrika fandraràna an'i Google raha tsy mifampiraharaha ny vokatra.
Fomba fitadiavana fikarohana dia tetikasa maharitra izay miasa amin'ny fampivoarana ny fahitana ny fandraharahana sy ny fanamafisana ny fidiran'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny valiny tsy voavidim-bola. Nolazaina ho teknolojia mainty SEO, ny voka-dratsiny dia nitarika ny famaranana tranonkala maro. Raha toa ianao ka manatanteraka ny iray amin'ireo fombafomba voalaza etsy ambony ireo dia diniho ny fanavaozana ny paikadinao sy ny hitifiranao ny tsenan-tserasera amin'ny alalan'ny teknikan'ny fotsy SEO fotsy.